Hiran State - News: Wararkii ugu danbeyey shirar is daba joog ah oo uu ka wado magaalada Dubai m/weynaha mustaqbalka Soamliya Prof Warfaa.
Wararkii ugu danbeyey shirar is daba joog ah oo uu ka wado magaalada Dubai m/weynaha mustaqbalka Soamliya Prof Warfaa.
HS:-Wararkii ugu danbeyey shirar is daba joog ah oo uu ka wado magaalada Dubai m/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa.
Wadanka isku taga Imaaraadka carabta waxaa ku sugan mudo dhawr maalmood ah m/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa. Professorka oo ujeedada safarkiisu sida lagu soo waramayo ay aheyd mid siyaasadeed oo uu ku marayo dhawr wadan oo bariga dhexe ka tirsan ayaa hadane marka dhinaca kale laga eego u muuqda mid aysan shirarkiisu joogsaneyn xitaa iyadoo lagu jiro maalmahii ciida oo aan inta badan laga shaqeyn wadamada Islaamka.
Professor Warfaa ayaa sida lagu helayo warar lagu kalsoon yahay maalintii shaleyto aheyd oo kaliya dhawr shir oo muhiim u ah ku qabtay Hotelka uu ka dagan yahay magaalada Dubai iyo meelo kale oo aan si rasmi ah carabka loogu dhufan laakinse loo maleynayo shirar muhiim u ah mustaqbalkiisa siyaasadeed ee uu ku doonayo inuu hogaanka dalka kula wareego, halka shirarka la kulanka jaaliyada Somaliyeed ee Dubeyna u dheer tahay.
Professor Warfaa marka la eego musharaxiinta u taagan xilkaan waxuu noqonayaa musharaxii ugu ololaha dheeraa taasi oo lagu micneeyey inuu isagu doonayo inta aanba la gaarin la wareegida hogaanka dalka inuu siweyn u dhax galo bulshada Somaliyeed isagoo waqti ku filan siinaya dhamaanba qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed,ee uu horey Professorka u sheegay iney yahiin dad nasab ah oo leysku haleyn karo oo wadada ayey ka leexdeene hadii leysku dayo in wadadii qaranimada oo ay ka weecdeen in lagu soo celiyo lagu soo celin karo ayaa hada shirarka ugu badan ee uu u joogo bariga dhexe lagu micneeyey kuwo diplomasiyadeed.
Shir sida aan xog rasmi ah ku heleyno qaatay ilaa 5 sacaadood amaba ka badan oo maalintii shaleyto m/weynaha mustaqbalka la yeeshey safiiro iyo marti sharaf kale oo ka socotay dhawr wadan oo ka mid ah wadamada daneeya arimaha Somaliya ayaa noqday shirkii ugu dheeraa ee uu galo musharaxu tan iyo intii uu gaaray magalada Dubai.
Dhinaca kale wararkii ugu danbeyey oo inaga soo gaaraya maanta waxey sheegayaan in m/weynaha mustaqbalka uu maalmaha inagu soo aadan siyaabo kala duwan ula kulmi doono masuuliyiin kala duwan oo ka mid ah bulshada Somaliyeed kuwaasi oo iskugu jira kuwo hada xilal muhiim ah ka haya maamulada ka jira dalka iyo siyaasiyiin horey dalka uga soo qabtay xilal kala duwan.
Ololahan ayaa u muuqda mid uu musharaxu siweyn ugu diyaar garoobay marka la eego sida waxkasta u yahiin arin laga shaqeeyey ka hor intii usanba safrin. sidoo kale shacabka Somaliyeed oo ah dad hadii aan leyska weyneysiin amaba aan lagu riixin dano qabiil hadii ay helaan hogaamiye daacad ah oo qabiilkasta iyo degankasta oo ay ku nool yahiin umada Somaliyeed kala hadla oo kaliya dhibaatada heysata amaba waxii horey uga qaldamay iyo sida loo sixi karo oo kaliya iyo jiritaankooda dadnimo ah dad si sahlan qaranimadii ka luntay kusoo ceshan kara.
Hadaba la soco warakena danbe iyo sawiro hadii ay inoo suurogasho
· admin on November 08 2011 11:46:20 · 0 Comments · 1707 Reads ·
14,638,268 unique visits